Uvalelise iMicrosoft | Kusuka kuLinux
Bengilokhu ngifunda ukuphawula “okuzondayo” maqondana neMicrosoft ne-Apple isikhathi eside, ngamunye enikeza isizathu sakhe, -isistimu yabo iphathelene-, futhi lona ngumbono wabo yingakho ngiyihlonipha.
Ngaphezu kwalokho, intambo ye- UTina Toledo futhi eyami ngenye indlela ezungezile.
Angizizondi lezo zinkampani, ngizwa nje ukuthi abanye "bayakwenyanya" imikhiqizo yabo futhi nginezizathu zami, bengingumlandeli weMicrosoft isikhathi eside, umsebenzisi we-Excel osezingeni eliphezulu, kepha ...
Kwesinye isikhathi ikhompyutha yami yaphuka, umngani wayo wayolungisa futhi kwadingeka ukuthi afakwe kabusha, lapho ngifaka futhi ngisebenzisa ihhovisi, ngathola isimemezelo sokuthi kwakungeyona eyangempela, ngithumele ama-imeyili ukubona ukuthi baxazulule yini inkinga yami, ngemuva kwezingcingo ezi-2 futhi Ama-imeyili ama-3 impendulo yokugcina yaba ukuthi: -Uxolo, yeqe umkhawulo wokufakwa, futhi ukuze usebenzise umkhiqizo, kufanele ukhokhele ilayisense entsha- queeeeeee? Ngingacabanga ukuthi umuntu kufanele akhokhe njalo u-X ukungena endlini yakhe noma akwazi ukusebenzisa imoto yakhe, - ngiyaxolisa, umnyango uvinjiwe, ukuze uphinde ungene kufanele ukhokhe ilayisense entsha--
Ngalolo suku ngathembisa ukuthi ngeke ngiphinde ngisebenzise imikhiqizo yeMicrosoft, ngabelana ngayo ngaleso sikhathi lesi sithangami futhi ngiyazisola ngempela ngokungalondolozi ama-imeyili engiwathunyelwe ideski losizo? futhi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule amawindi xp enginawo kwi-pc avuselelwa nokuthi ibingakafiki isikhathi esingaphezu konyaka futhi ekubeni ingeyokuqala ibingayisusanga, kepha ngemuva kokuqalisa kabusha okuningana, kokugcina angisangenanga, amawindi ahlala efile Ngabe kufanele ngiphinde ngithenge amawindi? Cha, akunjalo, futhi iqiniso ukuthi ngiyenqena ukufaka kabusha futhi ngibone ukuthi ingavulwa yini.
Ngine-laptop ye-HP g4, futhi ngemuva kwezithombe-skrini ezimbalwa zalezi:
Nginqume ukususa ngokuphelele amawindi ethangeni lami.
Kepha uma ngithembisa ukungayisebenzisi imikhiqizo ye-microsoft, ngingakugwema kanjani ukukhokhela ilayisense lewindows lapho ngithenga i-pc? Ngithole umuntu ozongithengisela imishini ngaphandle kokufakwa kwe-OS, ngathola i-acer aspire eyodwa D250 netbook, kanye I-AMD Phenom pc X3 (engabeka kuyo amawindows ngezizathu zomsebenzi) kepha intengo lapho ngiyithenga ibingaphansi kwelayisense. Kumele ngicacise ukuthi kufanele ngenze umsebenzi ogculisayo ukuze bangithengise imishini ngaphandle kokufakwa kwe-OS.
Yebo, wonke umuntu angaba nezizathu zakhe, ezinye zingabonakala zingenangqondo emehlweni abanye, kepha isixazululo sangempela ukuthi uma ungathandi, ungathengi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Uvalelise iMicrosoft
Ngizikhomba kukho konke ngale ndaba, ngiphinde ngahlushwa yilezo zimo ezinamalayisense okuqala futhi ngenhlanhla futhi ngingahlose ukuthenga i-Samsung RV408 (ngoba maqondana nezinye ezifanayo intengo ibiphansi kakhulu) futhi lapho ngifika ekhaya ngiyivula nganika akhawunti ukuthi…. Ayizange ilayishwe kuqala i-OS! ngokushesha nangaphandle kokucabanga izikhathi ezi-2 ngafaka i-Kubuntu 12.04 futhi ngayeka ukukhathazeka ngemfucuza kaM $; ku-netbook yami (ngenxa yezizathu zomsebenzi) ngishiye i-W $ starter evela efektri futhi ngicabanga ukwenza ubumbano nge-distro ethile.
Kuyinkinga ebucayi njalo, kukhona labo abangayithandi iWindows ngenxa yokusebenza kwayo, izinqubomgomo zayo futhi kuwe, isevisi yayo embi.
Ngokwami, angiyithandi nje ngoba ingenzele imigilingwane eminingi futhi ibize kakhulu ... iphuzu ukuthi ngeshwa kunabantu abathi bazonda iWindows ukuze nje bangene endaweni yeLinux futhi ngibonile ukuthi iyasebenza ngempela Abasebenzisi beLinux basibona ngqo njengabazondayo, iqiniso lokuthi le ndaba yehlukile.
I-athikili ethakazelisayo, siyakuhalalisela.
Inkinga ngeMicrosoft ne-Apple yindlela abaphatha ngayo umsebenzisi. Okokuqala, bakuphatha njengomthengi hhayi njengomuntu; okungukuthi, babeka izintshisekelo zabo zezomnotho ngaphezu kwezidingo namalungelo abasebenzisi. Kufika isikhathi lapho umuntu evele athi kuze kube manje! Ngenhlanhla kukhona iLinux.
Amanga. Awukaze uye ku-AppStore, akunjalo?
Sawubona 3ndriago, unjani? Ngiyakuphendula.
1. Wazini ngami ongakusho ukuthi angikaze ngiye e-AppStore.
2. Kungaliphi ilungelo othi umbono wami ukhululekile futhi uhlonipheke (njengowakho) ungamanga.
3- Iyiphi ingxenye yamazwana ami engamanga, indlela iMicrosoft ne-Apple abaphatha ngayo abantu?
4- Umbuzo awusiwo owomuntu siqu, okungukuthi, umbuzo ophakanyiswe yindatshana ka-Alf akukhona ukuthi ngike ngaya e-AppStore noma cha, noma ngabe ngisebenzise iWindows iminyaka eminingi noma cha. U-Alf, ngokuhlangenwe nakho kwakhe siqu, usho lokho akushoyo, nami, ngokwamava ami siqu, ngisho lokho engikushoyo. Angiyizondi iMicrosoft noma i-Apple noma abasebenzisi bayo. Ngiyabonga nje ukuthi kunenketho efana neLinux, yilokho kuphela.
5- Kuyiqiniso, sinelungelo lokungathengi lokho esingakuthandi, kodwa futhi nokuveza ukungavumelani kwethu nesimo sezinto.
Iya ku-AppStore uzokwazi ukuthi ngithini. 🙂
Ukwesekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu, ndoda!
Futhi ungabi nesibabule, ndoda.
Bengilokhu, yebo, kusobala ukuthi abakwa-AppleStores bakuphatha kahle, ngoba bakhokhela abasebenzi babo kodwa… Uwabonile amanani abo? Kimina ukuthi bangiphatha kahle esitolo akungitsheli lutho ngenkampani ngoba abayihloniphi inkululeko yami futhi abanandaba nombono wami njengomthengi ... bafuna nje ukuthi ngithenge imikhiqizo yabo, njenganoma iyiphi inkampani ...
Ungasho umbhedo onjalo mfowethu, ukuthi bakuphatha kanjani esitolo akuhlangene nakancane nakho.
Ngabe lokho kufanele kwenzeni? Ngabe ukubonile abakwenzela ukuthi usayine ukuze ukwazi ukusebenzisa i-itunes? Ngisho nepaki yaseningizimu yahlekisa ngayo
Ngamanani we-Apple nakho konke abakukhokhisa kabi, kungaba ukuthi ngaphezu kwakho konke ngeke bakuphathe kahle ku-AppStore, lelo ibhizinisi labo ukuthengisa ubuso obuhle, ukuthengisa isithombe esihle, ukudala ukuthenga abathengi.
Manje uma wonke umuntu esebenzisa imali yakhe kulokho akufunayo
Kulo mhlaba, ukuthi umuntu akunikeze izinto ezinhle futhi akhulume nawe okuhle akusho ukuthi ngaphakathi abacabangi izinto ezinjengokuthi "Ngintshontsha kahle."
Amabhizinisi namuhla, ngakho-ke, asuselwa ekusebenzeni kwamakhasimende ukuze aze akubonge ngoba akukhokhisa u- $ 100 wento efanele ukwenziwa $ 1
Phatha ngomusa nokudumazeka ukusebenzisa into engeyona engcono kakhulu noma elula kunazo zonke engicabanga ukuthi ayikwazi ukubizwa ngokuthi yi-Customer Support.
Njengokwesekwa kwemikhiqizo osuyithengile njengosizo lokufunda ukuthi ungayisebenzisa kanjani bakwenza kahle kakhulu, kepha njengesibopho (noma okubi kakhulu, ukushiywa kwesaziso) ukufaka isoftware eyengeziwe kulokho okufakayo bakwenza kabi kakhulu… .isibonelo esincane: IBonjour.
Hhayi lokho kuphela. Ngeshwa i-3ndriago iwile ngenxa yamasu engqondo abasebenzi be-AppStore, ngoba yebo mfowethu, basebenzisa izindlela zengqondo ukukuphatha njengesilima futhi bakuthengisele noma yini abayifunayo.
Ngiyavuma, ngivele ngathola lesi sithombe esisho konke!
Kubi hhayi ukuthi wonke umuntu ubona izinto ngaleyo ndlela xD
hahahahaha isikhundla senkawu esithombeni umyalezo ongaphansi?
Ngiphinde ngangena kuyena kufacebook futhi ngawathanda la mazwana:
@Zlatko, lapho uya khona, uvutha amalangabi. Okokuqala, ngingumsebenzisi we-GNU / Linux wansuku zonke, ngakha isoftware yohlelo lwe-GNU / Linux, futhi kwesinye isikhathi kufanele ngilungise inkinga eyi-Linux kernel. Futhi lokho ngikwenzela ukuziphilisa.
Okwesibili, ngiyazi ukuthi yini isoftware yamahhala, futhi iCopyleft (GNU GPL) AKUyona INkululeko. Amalayisense e-BSD (i-X11, i-MIT, njll.) Yilokho engingakubiza ngokuthi Mahhala.
Okwesithathu, ngiyayizonda i-Apple (HATE).
Ngakho-ke ake ngichaze ukuthi kungani kufanele uzifundise:
1) Isayensi yi-UNIX. I-Linux ayiyona i-Unix, futhi iMac OS X iyi-. IWindows inayo ungqimba lokuhambisana lwe-UNIX (oluhambisana ne-Single UNIX Specification / POSIX).
2) I-X, i-KDE ne-Gnome uqobo ziyinkinga. Impela, u-X wenze umsebenzi omuhle, kepha akuyona into abantu abaningi abangayifuna ukuze isitaki sabo sokuqhafaza sibe. Yingakho manje ithathelwa indawo yiWayland. Ngakolunye uhlangothi, zombili iMicrosoft ne-Apple zinezitaki ezinhle zokuqhafaza. Ikakhulukazi iMicrosoft. Kuzothatha iminyaka ukuthi iLinux isekele ukubonakala kokushintshwa kwehluzo (uhm, nVidia Optimus anyone). Futhi iWindows Longhorn ibe yeyokuqala ukubuka kuqala ideskithophu esheshayo (yagcina ukumakethwa, ngiyavuma lapha)
3) Kwenzeka kanjani ukuthi uMono abe yisayensi, kepha i-NET akunjalo? Uyazi ukuthi iMono umzamo wokusebenzisa iMicrosoft .NET CLI / CLR kuLinux, akunjalo? Kufanele ufunde ezinye zeMiguel de Icaza (uyazi ukuthi ungubani, akunjalo?) Imininingwane yakamuva mayelana nephrojekthi yeMono.
4) Uma ngabe wake wenza noma yimuphi umsebenzi obucayi, ngabe wajabulela iminyaka engama-20 + yokuhambisana kwe-API ne-ABI ku-ecosystem ye-MS, kanye nokuvumelana kwe-POSIX / SUS kwe-OS X.
Ngingaqhubeka amahora amaningi, uma ungathanda, kodwa ngithanda ukuthi nina freetards, nizifundise nina kuqala.
Ngenxa yalolu hlobo lwamazwana - nakubantu - ngine-Face $ hit ivinjiwe:
~ $ cat / etc / hosts
# / etc / hosts: Ithebula lokubheka elingaguquki lamagama wokubamba
127.0.0.1 i-localhost.localdomain i-localhost heybeavis
:: 1 localhost.localdomain localhost heybeavis
"Ukuxakaniseka okuyi-kernel ye-Linux"
Ngeke ngibize i-Linux kernel kahle njengobubi, yebo inkulu, inkulu, kepha uma ubheka _ konke engakwenza_ nokuthi ngenkathi iqala ukuthuthuka kwayo bekungekho mbono esinawo namuhla wekhompyutha noma ukuthi into ezoshaya kakhulu kubonakala kimi ukuthi benze umsebenzi omuhle.
«Okwesibili, ngiyazi ukuthi yini isoftware yamahhala, futhi iCopyleft (GNU GPL) AKUyona INKULULEKO. Amalayisense e-BSD (i-X11, i-MIT, njll.) Yilokho engingakubiza ngokuthi kwamahhala. »
Hhayi wena, skenag oyisilima.
I-GPL ayiniki nje kuphela inkululeko yokugcina neyokugcina yokuthuthukiswa kwesoftware kepha futhi ingeza nendlela yokuvikela engenayo ilayisense le-BSD: ukwenza konke okwenziwayo esikhathini esizayo kube nelayisensi ngaphansi kwe-GPL _ kusese mahhala_.
Ngokuphambene, ilayisense le-BSD alikho "mahhala" ngomqondo "wobukhosi" kepha ngomqondo "wokukhohlakala": noma ngubani angathatha isoftware enelayisensi ngaphansi kwale layisense futhi enze noma yini ayifunayo ngaphandle kokuphoqeleka ukuthi abelane ngekusasa lakhe intuthuko esuselwa kulelo layisense nomphakathi.
Ngokusobala isihloko esithumele amazwana owakopishile sizwa isiqinisekiso senkululeko yesikhathi esizayo ye-GPL njengomkhawulo, kulabo abacabanga njengaye ilayisensi ikhona. I-BSD.
"X, KDE kanye neGnome uqobo bayinkinga"
Yini engahambi kahle ngalo mfana ozacile, ukhuluma ngani!?
I-GNOME3 ideskithophu entsha ngokuphelele, ideskithophu entsha sha, ebhalwe kabusha kusuka ekuqaleni ngombono wamanje esinakho wokusebenzisa ikhompyutha nokucabanga ngekusasa, angicabangi ukuthi kukhona iphrojekthi ehlanzeke ukwedlula lena.
I-KDE, yize ikade ngaphambi kwe-GNOME3, yakhulelwa ngomqondo ofanayo wokuzivumelanisa nezimo nobuchwepheshe obusha obusetshenziswa yi-GNOME3 namuhla, empeleni, emhlanganweni wokugcina we-KDE dev eSwitzerland imihlahlandlela yokuqala yasungulwa ngokufuduka okuzayo kohlaka olusha. I-Qt5 ne-QML, into ebingenakwenzeka nhlobo uma isakhiwo se-modular base KDE besingesihle njengoba sinjalo.
Wonke umuntu ukhononda nge-X kepha kufanele uqonde izinto ezimbili:
1. X ukuguqulwa kohlelo lokuqala lwewindi le-Unix futhi ngenxa yalokho ifa imikhawulo yayo eminingi yokwakheka, eyinhloko ukuthi iLinux akuyona i-Unix kepha uhlelo olufanayo - futhi ekuqondeni kwami ​​kangcono, ngoba isesimanjemanje futhi yakhiwe kakhulu ezisekelweni zamakhompyutha zesimanje.
2. X is heavy, it is slow, blah blah blah, but what 99% of the people who use GNU / Linux do not know that it is a complete graphical server that allows you to do MAGIC: from opening many desktops at the same time (for isibonelo i-GNOME ku: 0, i-KDE ku: 1, njll.) kufanele ivumele, ngokwayo, ukuthi ibe nesakhiwo se-ThinClients inqobo nje uma umshini wesiphakeli unamandla ngokwanele. Iyiphi indlela yokukhuluma nedope le @Zlatko.
IWayland iyiqiniso ukuthi ithembisa ukuguqula indlela esisebenzisa ngayo isikhombimsebenzisi sokuqhafaza, kepha isantula okuningi, impela, ngamagama kaShuttelworth ngeke ibe ngaphansi kweminyaka emihlanu ngaphambi kokuthi siyisebenzise njengohlelo oluzinzile ama-desktops ethu futhi, ngalokho futhi kukho konke, izicelo ezihlanganiswe ngokuxhaswa kwe-X zizoqhubeka nokuba iningi.
Ngokwezifundo ezithile ezizimele kukholakala ukuthi u-X usazoba khona iminyaka engaba ngu-20 emihle ngaphezulu.
Ngakho-ke, futhi: vala umlomo wakho iZalkto.
«Ngakolunye uhlangothi, bobabili iMicrosoft neApple banezitaki ezinhle zokuqhafaza. Ikakhulukazi iMicrosoft. Kuzothatha iminyaka ukuthi iLinux isekele ukubonakala kokushintshwa kwehluzo (uhm, nVidia Optimus anyone). Futhi iWindows Longhorn ibe yeyokuqala ukubuka kuqala ideskithophu esheshiswe ngokuphelele (yagcina ukumakethwa, ngiyavuma lapha) »
Angikwazi ukukhuluma ngesitaki se-Apple ngoba angisazi, kepha ngicabanga ukuthi kuzoba yi-X eguqulwe kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Amawindows ayakhuluma, ukhuluma ngani lo mfana?
Kulabo abangazi: isitaki sokuqhafaza samawindi seWindows siyingxenye ebalulekile ye- "kernel" yayo, ngakho-ke lapho ingxenye yokuqhafaza ishayisa umshini ulenga!
Akugcini lapho: IMicrosoft inEMINYAKA yokuhlanganisa nokupholisha ubuchwepheshe ababubiza ngokuthi iDirect3D (abayithenga kanye nenkampani ebibuthuthukisa cishe ngonyaka ka-2000) nangalokho kanye nazo zonke izilinganiso zakamuva zeSteam ezineLeft 4 Dead ku-GNU / Linux Ubuntu CRUSH ukusebenza komdlalo ofanayo ku-Windows, lapho kulungiselelwe ngangokunokwenzeka. Masikhumbule futhi ukuthi abashayeli behluzo abaphathelene neWindows basebenza ngendlela ehlanganiswe kakhulu kuneGNU / Linux.
Ngakho-ke, futhi, vala i-cul_ Zlaptko noma ngabe ungubani igama lakho.
"Uyazi ukuthi iMono iyimizamo yokusebenzisa iMicrosoft .NET CLI / CLR kuLinux, akunjalo?"
Ngiyavuma ukuthi umfana okhuluphele owenza umdwebo wafaka uMono ngaphandle kokwazi ukuthi uyini isihogo, ngoba nje kufanele ukuthi uzwile ndawo ndawo ...
IMono iyaphuza, kanjalo nje.
Ngenhlanhla uMono uyafa, iningi lama-distros alisusile ekufakweni kwalo okuzenzakalelayo (Ubuntu yisibonelo esihle kunazo zonke) futhi masibhekane nakho: ngaphandle kosizo ne-push of distros njengo-Ubuntu, openSUSE noma i-Fedora, iMono ayinakusasa ngaphandle yiba phambili kwe-Microsoft enkundleni ye-F / LOSS ye-niche elinganiselwe kakhulu.
«4) Uma ngabe wake wenza noma yimuphi umsebenzi obucayi, ngabe wajabulela iminyaka engama-20 + yokuhambisana kwe-API ne-ABI ohlelweni lwezemvelo lwe-MS, kanye nokuvumelana kwe-POSIX / SUS kwe-OS X»
HAAJAJAJAJAJAJAAJAAJA, SEEEGUUUUROO !!
Kungakho esikhathini esifushane esedlule bekunesixakaxaka * esikhulu kwinethiwekhi yonjiniyela beMicrosoft ngoba i-interface entsha yeMetro ayigcini ngokubukeka kuphela kodwa futhi nangokuhlela, ngakho-ke konke okufundile kuze kube manje kuzosebenza njengolwazi kuphela. funda ama-API amasha kanye nemiqondo yeMetro ukuze uthuthukise izinhlelo zokusebenza ezintsha ze-xD
I-Apple ayihambisani neze ne-POSIX noma, i-kernel yayo imfoloko yaseDarwin ngakho-ke AKUYONA UNIX, ngakho-ke futhi, iZlaptko noma ngabe ungubani igama lakho, fuck off =)
"Ngingaqhubeka amahora amaningi, uma ungathanda, kodwa ngithanda ukuthi nina freetards, nizifundise nina kuqala.»
Ngingathanda ukubona ukuthi kufanele uthini, yize kususelwa kulokho okushilo kuze kube manje kuyinqwaba yezinto eziwubuwula.
Okubi kakhulu ukuthi akanacala, uyisisulu nomphumela wokucindezela okubi ne-FUD okuvela ngakulolu hlangothi olufanayo.
Ngaphandle kokuthi "izimbali" ezimelene ne-KDE zinento yazo, ngicabanga ukuthi kulelo qembu yilona elithambile, ngoba kokunye abakuphonsa khona kuyicucu nakho konke okuvela ngakulolu hlangothi olufanayo.
Vele ngicabanga ukuthi konke lokho kuhlaselwa okwenziwa ngokumelene nalezo zinto akunabulungiswa, ukuze ungafika kude kangaka ukuhlaselwa kuka-X ukusidayisela kuphela okuthile esingazi nokuthi kukhulunywa ngani, kepha njengoba kuyinto entsha «kufanele ungene ibhasi ukuba segagasi nokubeka i-FUD entweni yakudala ukukhombisa ukuthi siyaziswa ».
Ubuqili be-antiGPL ne-proBSD yinto ebuye iqale kakhulu kulolu hlangothi, ifakwa ngaphezu kwazo zonke izinkampani ezenza isitshulu nge-Opensource nabalandeli bakhe.
Noma kunjalo, uma sikuthengisa lokho, bayasithenga.
amabhentshi we-Steam akamuva nge-Left 4 Dead ku-GNU / Linux Ubuntu CRUSH ukusebenza komdlalo ofanayo ku-Windows, lapho kulungiselelwe ngangokunokwenzeka.
Ndoda, lokho ngeke kube yibufakazi bento, kungukukhangisa kweValve ukusidayisela nokwenza i-hype futhi abanikanga ngisho nobufakazi, yizwi labo nje.
I-Apple akuyona leyo ehambisana ne-POSIX noma, i-kernel yayo imfoloko yaseDarwin ngakho-ke AKUYONA UNIX,
NGIBONA ukuthi iMacOSX inesitifiketi sayo se-UNIX, abanye bangasho ukuthi ubukhulu.
Yeka indlela engijabula ngayo namuhla! Ekugcineni sengiyazi (funda) umuntu oqonda umbono wami! Konke kuza kulelo binzana: "uma ungayithandi, ungayithengi"
Fuck! Kungani abantu beba yinkimbinkimbi kangaka?! Futhi empeleni lokho kuyangithukuthelisa, uma begxeka i-WordPress, bagcina besola i-MS ne-Apple. Uma bekhuluma nge-Photoshop vs Gimp, bagcina besola i-MS ne-Apple. Uma iphepha lasendlini yangasese liwaxebula, impela lenziwa yi-MS noma i-Apple !!!
Kubukeka sengathi into enzima empilweni akukhona ukunquma ukuthi uthandani, kepha ukuqonda ukuthi okuthandayo akusikho okungcono kakhulu komunye umuntu. Isixazululo, ngoba esivele sishilo: "uma ungayithandi, ungayithengi"
Lokhu sengikuvezile kanye kule bhulogi, kepha ngicabanga ukuthi kufanele kukuphinde lokhu: Emsebenzini wami kunemishini emibili ye-CNC, inani elilinganisiwe lama-3/4 wezigidi zamaRandi phakathi kwale mibili. Isoftware ibidingeka ukudala izinhlelo kungumnikazi, izindleko zelayisense zingama-25k futhi ziyamangaza! itholakala kuphela ngeWindows. Le mishini ikhiqiza malini ngonyaka? Cishe izigidi ezi-2… Othile uyacela, khipha umshini wokubala wenze izibalo, ingabe kufanelekile ukukhokhela amalayisense noma cha?
Impela, ngiyaxolisa ngokugxambukela kodwa "uma ungayithandi, ungayifundi" ... Lokho kulula, ukuveza imibono akunjalo ukuze i-smartass ifike isiphikise kodwa ukuze nje umuntu onombono ofanayo noma ofanayo wethu aqonde futhi ngokulinganayo ziveze… Singabantu abahlekayo… Ngiyayiqonda imibono yakho, udinga iWindows futhi ngisakubuza, uyayithanda iWindows?; Yebo, noma ngabe iyi-software enhle kakhulu futhi njengabaningi bethu asiyithandi nganoma yisiphi isizathu futhi hhayi ngenxa yalesi sizathu iyafa noma iyeke ukuba yiWindows. Angicebile ngakho iMicrosoft edlule ingenze ngabiza kakhulu, ngayeka ukuthenga izingubo zokulungisa iphutha lefomu futhi angijabule, esikhundleni salokho wena nezigidi zakho unezinhlobo ezahlukene zokunambitha noma amathuba. I-Apple inikeza insizakalo enhle kulabo abangayikhokhela noma nini lapho bezizwa bethanda. Futhi ithikithi? Lezi yizikhathi zenhlekelele lapho usosayensi wekhompyutha ompofu (njengami) eneLinux yokukhululeka futhi uzokweba iWifi kumngani wakhe omkhulu (uxolo, uMartha XD) ukuze akwazi ukusebenza ngaphandle kokulahlekelwa ngaphezu kwalokho akutholayo ... ukuthi nakanjani kukhona imakethe yakho konke.
Uyazi, sesivele singohlelo ababili ngaphandle kwemali xD
Hahahaha, akukhona ukukhathazeka, okubalulekile akunakuqhathaniswa nokwabiza kakhulu ... I-Linux eyigugu evula ingqondo yakho olwazini oluthe xaxa, kuyabiza kuwe ukuthi uzivalele kwilayisense lapho abanye bakuphatha ngentando.
Ngingumfundi nje, ngineminyaka engu-17. Kungani kufanele ngikhokhe ilayisense ebizayo? Ngemidlalo? Ngisho leyo mpilo yayingenjalo nje; Ihhovisi lini? Angiyidingi ngoba ngisebenza kakhulu ngilungisa ama-PC kunokubhala imibhalo kahulumeni.Luphi uhlelo lwe-X olusebenza kuWindows kuphela? Kulokho kunezinye izindlela neqhude elihle kunoma yikuphi ukucula kwegceke. Ngiqonde ukuthi, Nano, angiziboni sengisesimweni sokondla lawo ma-lobster acebile lapho ngidinga ukudla okuningi kunawo (nginesisindo sama-100 lbs!), Amalayisense okuphatha awanabuntu kimi. Ngingagxili kakhulu-ke, abanye bazothi ngiba nehaba, kodwa bangakholwa, akusilo uzungu, kuyinto engokoqobo evalwe ubugebengu.
Ake sibone mngani wami, ngiyisisebenzi esilula, hhayi umnikazi wenkampani, ngakho usozigidi mkhulu kakhulu kimi (ngeshwa) XD
Bengizama nje ukwabelana nawe. umbono ohlukile.
Njengoba usho, umbhali ngamunye ushicilela akufunayo futhi kuyilungelo lakhe, kepha njengoba kunenkambu yokuphawula, ngoba wonke umuntu naye uphawula akufunayo, akunjalo?
Ngiyabingelela futhi ngicela, i-caffeine encane huh? 😉
Kepha ngubani othe awakhiqizi noma awakhiqizi imali? Lokho akusilo iphuzu lapha, futhi akekho umuntu olwela konke okushoyo, u-Alf uthe akayithandi, akayithengi, ngathi angiyithandi futhi angiyisebenzisi futhi, futhi uJotaele uthi ngiyabonga kukhona enye indlela yalabo abathi abafuni ukuyisebenzisa… Ufuna ukudala ilangabi ngokombono wami futhi angiboni ukuthi kuyadingeka lapha, ngoba le timu ayiyona ilangabi.
Mayelana namalayisense nenzuzo nakho konke okufunayo, kulungile, kuphelele, benza imali, kepha kunezibonelo zokuthi isoftware yamahhala ikhiqiza kanjani inzuzo enkulu (iRed Hat, iSuse?) ...
Ngiyavuma ngokuphelele! Eqinisweni, nginikeze isibonelo sendawo engisebenza kuyo ukucacisa lokho okushiwoyo: uma ungakuthandi, ungakathengi. Uma ngakolunye uhlangothi kunenzuzo, yithenge! Ngaphandle kwempikiswano nhlobo, kuliqiniso elikhulu njengesakhiwo!
Ayikho njalo inketho yokuthi UNGAYITHENGI umngani.
Ungaya kusiphi isitolo futhi uma uthenga ikhompyutha, yithi: «Angifuni ukuthi ibe ne-Windows, yehlise ama- $ 50 e-Windows ngoba angiyifuni?
Kepha ungathenga ikhithi futhi uyenze yakhelwe ngokwezifiso !!!
Yebo, kunjalo, kuhlale kunenketho yokuthenga ibhodi, i-CPU ne-RAM, ukuthenga i-chassis nezinye izinto, ngaphambi kwalokhu ukubhala wena futhi unombono omncane wehadiwe, ukuqinisekisa ukuhambisana nokunye okunjalo.
Kepha siyazi ukuthi ungakwenza kanjani lokho, wena, mina, nabanye abaningi abafunda lokhu ... kepha, umsebenzisi ojwayelekile (othanda ukuvikela abaningi haha), akanayo i-NPI yokuthi ungakwenza kanjani lokhu.
NGABE UYAKHOKHELA NGEMPELA AMALAYISENSI EMICROPOF?
HEWU NKOSI YAMI!!!!
Njengoba kuxaka njengoba kuzwakala, kuyinto efanele ukuyenza.
Yonke intuthuko inezindleko ezihambisanayo ngakho angiboni ukuthi kungani kufanele ibe mahhala ngenkani, ngaphandle kwalokho uma umkhiqizo uthengisiwe noma unikezwe ilayisense futhi sawuphoqa, akulungile, simane siyantshontsha.
Inkinga ukuthi umuntu uvame ukuhlubuka akhokhele amalayisense ngoba:
1. Kubiza kakhulu maqondana nenzuzo abasinika yona nemikhawulo abasibekela yona (kusebenza kukho kokubili isoftware nomculo noma ukulanda ama-movie asemthethweni asabiza kakhulu maqondana nomkhiqizo)
2. Sikuthola kungenakwenzeka ukuhlanganisa i- "licence" + "pay" + "Microsoft" ngenxa yokudinwa yisoftware yabo engatheni.
Ngokufanayo, noma ngabe sihlubuka kangakanani, noma ngabe asiyithandi kangakanani imikhuba yabo yebhizinisi noma imikhiqizo yabo - uma sikhuluma ngobuchwepheshe - ukuphanga kuwukweba.
Manje, uma sibheka imikhuba edelelekile ezinye izinkampani ezinjengeMicrosoft ezinayo, esusa umncintiswano okhiqiza imikhiqizo engcono kunabo, ukufumbathisa izikhulu ukuze zifake imikhiqizo yazo ekuphathweni komphakathi futhi kufaka nabangemuva kohlelo lwazo lokusebenza, ubugebengu bungathathwa njenge uhlobo lokuvukela nokubhikisha nokuhlala endaweni empunga okunzima kakhulu ukuyichaza (uma umubi, ngimbi kakhulu).
Ngalokho futhi konke abanye abenza okuthile okungalungile akuchazi ukuthi nathi siyakwenza ... yize sibuyile, uma siyizithunjwa zezinkampani ezifuna konke ukuthatha amalungelo ethu njengabasebenzisi nabathengi nangamanani amabi ngokusungula ngaphambilini ukuzibusa, okuwukuphela kwento esele ukuthi silwe namathuluzi abo futhi sisebenzise indlela yabo yokuziphatha ngokumelene nezinye izinkampani nangokulwa nathi uqobo.
Izikhathi eziningi akulula kangako ukunquma nokukhomba umunwe kulula kakhulu.
Yebo, ngoba yize iMicrosoft iyinkampani engingayithandi, angibusekeli ubugebengu futhi ngiyabubalekela kuze kube yisinqumo sokugcina, yingakho ngingenawo amawindi kukhompyutha yami, ngoba angiyithathi, ngingunjiniyela yingakho ngazi ukuthi kubiza ini yenza izinto futhi kubuhlungu ukweba kwabanye onjiniyela.
Yize abanye bengosozigidi abahleka ubumpofu babanye ... Wena Nano omkhulu! ... Kuyiqiniso, basifaka ejele ngenxa yokugenca futhi bafuna ukusibulala ngokungasebenzisi imikhiqizo yabo (hhayi ngokoqobo) ...
Kubonakala kulungile futhi kuhlakaniphile kimi. Empeleni ngiyayithanda leyo filosofi, uma ungumnikazi wayo futhi uyayidinga, ikhokhele. Uma kungenjalo, funa ezinye izindlela. Sethemba ukuthi wonke umuntu uzocabanga kanjalo!
Futhi sizokwenzenjani uma singakwazi ukuyikhokhela futhi okunye kungeyona yangempela? Ngithi i-AutoCAD kunzima ukuyikhipha, ngeLibreCAD noma ngeNanoCAD uyasilela, kepha kulungile, akuyona ingane ezothenga leyo layisense yokudweba ... Noma kunjalo, besizokwenzenjani?
Hhayi, angazi 🙁
Kepha ngicabanga ukuthi uma uzosebenzisa okuthile ukuhweba, kufanele ukhokhele umbhali lokho akufunayo.
Uma usebenza enkampanini, inkampani ithenga amalayisense wangempela, uma uthenga ilaptop, iza namanye amaWindows afakiwe kanti nelayisense lifakiwe entengo. (ngaphandle kokuthi uthenge ama-laptops nge-FreeDOS)
Bekufanele ngikhokhele i-w7 starter licence (engangivumeli nokuthi ngiguqule iphephadonga) ngoba ilaptop eshibhe engiyitholile ifike nalokho, ngilahlekelwe yimali kwilayisense ngoba angisebenzisi amawindi kodwa bengingenayo enye indlela engcono.
Kuhle, hahaha. Intombi yami ine-asus eee pc kwathi ngelinye ilanga yangitshela ukuthi ngishintshe iphepha lodonga elalingakwazi ngacabanga ukuthi kwakuyihlaya. Eqinisweni, lapho sengingene kugalikhi kwabonakala kungakholeki ukungakwazi futhi ngacabanga ukuthi ukusebenza kulayishiwe, ngoba ngangibeke umunwe wami lapho kungafanele khona ngesinye isikhathi (njengasemafasiteleni, kukuvumela ukuthi wenze lokho okufunayo ngaphandle kokufuna izimvume eziningi kakhulu ), ngoba kuyinto eyisisekelo kangangoba akufanele ivinjwe.
Ekugcineni ngicabanga ukuthi uhlelo lufakiwe ukukwenza, into ebonakala inamandla kakhulu kimi, kepha hheyi, iphuzu ukuthi manje ngithola nawe ukuthi umsebenzi awufakiwe. haha.
Kungikhumbuza ngendatshana ethakazelisa kakhulu engiyifunde esikhashaneni esedlule:
I-PS: 100% mahhala yemikhiqizo engu-M $ iminyaka engaphezu kwengu-6… 🙂
Angisebenzisi windows ngoba angiyithandi, ngoba konke engidinga ukukwenza sekuvele kwenziwa nge-linux, ngaphandle kokuthi ngikhululekile futhi ngikhululekile, kungani usebenzisa windows noma i-mac? futhi i-linux iyathakazelisa futhi uma ikukhombisa ukuthi uhlelo lokusebenza lusebenza kanjani (ngoba ungabona ikhodi, njll.) ngumbono wami.
Kuleli lizwe (Honduras) angikaze ngiyibone ikhophi esemthethweni ye-software ephathelene nokuphathwa, futhi kuyangiphoqa ukuthi ngiphoqeleke ukusebenzisa imifantu, ukwenza izinguquko eziyinhlekelele ohlelweni lwekhodi oluvaliwe, nokunye okungahambi kahle.
muva nje banginike ilaptop futhi ifike namawindi 7, ngeshwa ayihlalanga ngisho amahora ama-2 lapho sengivele nginefayela
Inothi liyiqiniso, awubazondi abasebenzisi be-Apple noma beMicrosoft, noma izinkampani, uvele uzizwe unengeka ngemikhiqizo yabo nangendlela yabo yokuhlukumeza yokusebenza. Ngiyaqonda ukuthi kukhona isoftware ekhethekile ukuthi imali yatshalwa ukuyikhiqiza futhi isebenza kuphela emawindini, kepha, lokho okwenzelwe ochwepheshe, abathi, ukuklama noma yini engikwaziyo, kimi, umfundi olula waseyunivesithi wobunjiniyela izinhlelo zamakhompiyutha, i-linux ingaphezu kokwanele, kepha akunjalo kumklami noma lowo osebenza nemishini ye Angazi ukuthi zingaki izigidi ze-xDDD.
Ngokuqondile, i-Apple noma iMicrosoft akudingeki zazi ukuthi ikuphi iHonduras XD (ihlaya elibi).
Kepha hheyi, wonke umuntu ngombono wakhe futhi ngivumelana kakhulu no-Helena. Iqiniso alikhululekile kangako, kepha likhululekile. Khulula ulwazi olutholile futhi ukhulule umsebenzisi ukuthi alufunde. Isoftware Law yamahhala noma cha?
Hhayi-ke, ihlaya alibonakali limbi kangako kimi, uma sikhumbula ukuthi kungekudala nje isikhulu se-gringo saphuma sathi singathanda ukukhuluma "isiLatini" ukuze sibe nethuba lokuxhumana kangcono nabantu baseLatin America. O_o '!
Ngakho-ke ihlaya alilibi, kepha likhombisa iqiniso elibi kakhulu
Kubi kangaka? Haha ngiyabonga ... Kulungile kunjalo, kungani kukhala uma singahlekela ihlaya elibi ... Iqiniso ukuthi siyimakethe ye «« », entantayo, okusho ukuthi: Sifunda ukukhuluma isiNgisi noma bafunda ukuqonda iSpanishi ... Kulungele leso sikhulu , ekugcineni inhlanzi efuna ukubhukuda emanzini amahle ...
Konke lokho kubonakala kukuhle kimi. Kepha bangaki abangavuma ukukhokhela ilayisense le-SUSE noma iRedHat?
Noma bazimisele ukwenza umnikelo ku-distro abayisebenzisayo?
Eminyakeni eminingana edlule angibonanga isikrini esiluhlaza seWindows, siyethusa. Njengoba sigxeka izinqubomgomo zale nkampani, kufanele futhi sibonge nakumaWindows asithinte asifundisa ukusebenzisa ikhompyutha, ngaphezu kwalokho lolu hlelo lokusebenza lusebenza njengesethenjwa sokubaluleka kweLinux yethu ehlonishwayo kakhulu.
Le yindaba engapheli, sonke siyayazi futhi akukho okumele kwenziwe, ngamunye unezizathu ezihlukile zokusebenzisa i-Linux distro, ngayinye iyasebenzisana ngangokunokwenzeka noma okungenani ngokuhlukile kunendlela abanye abenza ngayo futhi sicela uyeke ukusebenzisa Isimo senhlalo yabantu abasebenzisa i-OS eyodwa noma enye, ngiyabazi abantu abasezingeni eliphakeme abasebenzisa i-Linux nabantu abasebenza abachitha konke ukuthola i-iPhone futhi babukise endaweni yangakubo, leli iqiniso elidabukisayo
Angazi noma nginentshisekelo yokwazi ukuthi insiza yakwa-Apple iphambi kwamakhasimende ayo, iqiniso ukuthi le nkampani ayikaze ingikhange, kepha ngiyazi ukuthi iMicrosoft injani futhi kufanele ngithi kuyesabeka, okungukuthi, uma ukwazi ukudoba Okuthile okungcono kunokukutholela inhlanzi, ngicabanga ukuthi kuwumqondo ongcono. Sekuyiminyaka eminingi ngisebenzisana neWindows nazo zonke izinkinga zayo, ncamashi windows xp futhi leyo inguqulo yamawindows engiyihloniphayo ngenxa yobude bayo, kepha empeleni windows into engiyizondayo futhi njengoba ngisebenzisa i-GNU / Linux eh sense umoya wenkululeko ongekho mayelana nokungadingi ukuthenga ngoba ngikholwe ukuthi ngilingwe ukuthi ngithenge iphakethe leRed Hat Enterprise Linux kepha ngokwazi ukuthi leyo khodi ungayisebenzisa ngaphandle kwenkinga yokuvinjelwa, iqiniso ukuthi Kwabaningi, iMicrosoft yenze umusa omkhulu ngokwenza lula ukusetshenziswa kwamakhompyutha abo kepha uma ucabanga ukuthi ngokukhokha unayo insizakalo yakho, wenza iphutha usenayo enye into futhi ayilungile njengegciwane le-pc elihle, futhi hhayi Ngicabanga ukuthi uyothenga yonke isoftware ukuvikela i-pc yakho, lokhu kungenxa yokuthi umuntu usebenzisa i-GNU / Linux, ngoba yinkululeko yomsebenzisi osengozini kanye nohlelo lwakhe futhi.
Ngijabule ngokusatshalaliswa kwami ​​(iFedora) futhi selokhu ngayeka ukusebenzisa amawindi, impilo yekhompyutha yenze kwaba lula kimi futhi sengifunde okuningi.
Ukufunda imibono kufanele ngibe neqiniso, angiyisebenzisi iLinux ngenxa yefilosofi, angikhathaleli (ngaphandle kwe-acrimony), okubaluleke kimi ukusebenza kwe-laptop yami, i-pc eyendodakazi yami kanye ne-netbook yomkami.
Ukukhokhela i-redhat? Vele bengingathanda, uma ngikhokhela ilayisense le-1 le-Windows nelayisense ye-1 Office, impela bengizokhokhela iLinux, kepha kuze kube namuhla Ubuntu bekungumsebenzi wami futhi awuzange ungilahlekisele, iminikelo? Sengikwenzile, akuyona into enkulu ngoba iphakethe lami aliyivumeli.
—KZKG ^ Gaara
Ungaya kusiphi isitolo futhi uma uthenga ikhompyutha, uthi: "Angifuni ukuthi ibe neWindows, yehlise ama- $ 50 e-Windows ngoba angiyifuni? -
Ngiyavuma ukuthi ayikho njalo inketho yokungathengi, kwangithatha isikhathi eside ukuthola umuntu ongangithengisa imishini ngaphandle kokufakwa kwe-OS, ikakhulukazi i-netbook, ne-pc kunzima kakhulu, kepha ngenani elithile lokukholisa wangithengisela lona, ​​cishe unyaka ongu-1 odlule Angiyi, kepha umngani wami uyaqhubeka nokuthengisa okokusebenza; Ngithole lo muntu ngemuva kokuvakashela cishe (ngingaqinisekisa) zonke izitolo lapho bathengisa khona imishini yekhompyutha, futhi ngathenga i-pc kuqala, ezinyangeni ezi-5 kamuva i-netbook.
«… Angiyisebenzisi iLinux kwifilosofi, anginendaba nayo (ngaphandle kwesiminyaminya), okubalulekile kimi ukusebenza kwe-laptop yami…»
Alf, angifuni ukukugxeka ngala mazwi angenhla noma ngiphikisane nawe, kepha ngiphawula ngalokhu ngoba ngicabanga ukuthi kubalulekile. Ngicabanga ukuthi awukwazi ukwehlukanisa i-Linux OS "nefilosofi" ye-Linux. Lokho ukuthi, kunemibono ethile, amanani noma uma uthanda, "ifilosofi" eyenza ukuthi iLinux ibekhona futhi ibe yilokho okuyikho, futhi ngathola, isibonelo, ukusebenza kahle kwe-laptop yakho. Ngaphandle kwaleyo filosofi, iLinux ibingeke ibe khona. Yebo, ngubani ongaba nentshisekelo yokwakha uhlelo lwamahhala, olunamagugu omphakathi, ukube bekungeyona ifilosofi eyazisa lokhu ngaphezu kwezintshisekelo ezinkulu zezomnotho zezinkampani ezinkulu zamakhompyutha?
Uma lokho okushoyo ukuthi awufuni ukungena engxoxweni yezingqondo, noma lokho, akukhona ngenxa yezizathu zokuthi ukuLinux, ngicabanga ukuthi kulungile. Kepha, ngicabanga ukuthi uma ngisebenzisa i-Linux, noma ngabe ngiyathanda noma cha, ngicabanga "ifilosofi". Okungasho ukuthi ngiba ngumuntu oshisekayo ozonda labo abangacabangi njengami, noma ukuthi ngiyazizonda ezinye izinhlelo ezisebenzayo.
Jotaele ngiyalithola iphuzu lakho, futhi njengesikhangiso se-TV sisho, ake ngilihlafune.
Le bhulogi ayisabizwa ngokuthi "isuka ku-Linux" isaya ku- "Linux yeTaliban" ... Imakethe ibanzi kakhulu futhi zonke ezinye izindlela zesoftware zivumelekile. Ngiyamthanda uDebian wami futhi yilokho engikusebenzisa nsuku zonke ukusebenza. Kepha nginemikhiqizo ye-Apple futhi ngiyaneliseka ngolwazi abanalo ngabasebenzisi, insizakalo yezobuchwepheshe ikufanele lokho okukhokhela imikhiqizo.
Kepha ngaphezu kwalokho, kubaluleke ngani uma inkampani ithengisa amalayisense ayo abizayo noma inemodeli yokuphathelene nemikhiqizo yayo? Yindlela abenza ngayo ibhizinisi nabaziphilisa ngayo, uma abantu beyithenga yenzelwa okuthile. Sinezinye izindlela zamahhala cishe kunoma iyiphi isoftware ekhokhelwayo, futhi enekhwalithi engenalutho lokuhahela izimbangi zayo. Mina ngokwami ​​ngine-libreoffice efakwe kwi-iMac yami ngoba ihlangabezana ngokugcwele nezidingo zami kangcono kune-Apple's suite.
Manje, uma umuntu enemali yokuyisebenzisela ukukhokhela amalayisense ahlukene angamashumi amathathu futhi adlulise isoftware yamahhala, kuyinkinga yakhe, wonke umuntu usebenzisa imali yakhe ngendlela athanda ngayo futhi yingakho ingaphansi noma ngaphezulu kunaleyo yethu enquma ukusebenzisa eminye imikhiqizo. Le mpikiswano eyinyumba eholela ekubeni ize ngoba okuthandwa ngandlela thile ngeke kushintshe izindatshana ezintathu noma ezine ezihlasela i-MS noma i-Apple. Asibona abanikazi beqiniso eliphelele futhi ukungavunyelwa kwabanye akusenzi silunge ngokwengeziwe. Ngokombono wami othobekile kunezinto eziningi ezingakhulunywa ngazo emhlabeni weLinux ngaphandle kokuphinda isihloko ngemuva kwendatshana ukuthi zimbi kangakanani izinkampani ezilawula imakethe.
kunezinto eziningi ezingakhulunywa ngazo emhlabeni we-Linux ngaphandle kokuphinda i-athikili ngemuva kwendatshana ukuthi zimbi kangakanani izinkampani ezilawula imakethe
Lokhu yikho kanye okuzama ukukwenza.
Njengoba iLinux kungesona isayithi lapho kushicilelwa umsebenzisi oyedwa kuphela, noma ababili, akusengona nje i-elav nami esasungula isiza futhi sibhala kuphela.
Mina ngokwami ​​ngizama ukunikeza okokufundisa ngaphezu kwanoma yini, ngoba ngiyabona ukuthi ama-tutorials amahle ayadingeka kunethiwekhi, abanye abasebenzisi bazama ukwabelana ngolwazi lwabo noma iphuzu lokubuka view
IMicrosoft ayikaze ibe yimbi "edingekile", imane nje NGOKUBI (iyaphoqa, ikhawulele, izilawule, ihlukumeze, ikhokhise kakhulu imfucumfucu yayo, ibukela phansi futhi ihlasele labo abayigcinile futhi bayicebisa ngobuwula iminyaka engama-36). Vumela uGates noBallmer babole. Amen.
Futhi kubuhlungu ukuthi kubi okwenziwa ngabathengi, sesivele sizijwayeze zonke izinkampani zanoma yiluphi uhlobo ukuthi sizokhokha noma yini ukusebenzisa imikhiqizo yazo, akunandaba ukuthi konke kungabiza kancane futhi kube ngcono.
Kimi, phakathi kobunzima obangenza ngathatha isikhathi eside ukufunda ngezinhlelo ze-gnu / linux, bathola leyo abangakaze bangifundise yona esikoleni ukuthi kukhona okunye ngaphandle kwamawindi, ngangazi ukuthi i-apula likhona kepha abakaze bangifundise lutho ngokusebenzisa ama-macos systems futhi ngiyacabanga ukuthi leyo ngenye yezinkinga ezenza uhlelo lwe-gnu / linux lube nzima kubasebenzisi bokugcina, iqiniso lokuthi ama-windows systems akuzo zonke izikole futhi yilokho abakufundisa ngakho. Angazi noma iyiphi indawo lapho bakufundisa khona nganoma iyiphi i-linux distro emfundweni eyisisekelo (noma i-minix noma i-bsd engaphansi kakhulu kwe-unix) okungajwayelekile kakhulu. ukuthi wonke umuntu asebenzise uhlelo olubafanela kangcono kepha okungenani izinketho akufanele zikhawulelwe kusukela ekuqaleni kuze kube yizinhlelo ezimbili kuphela zokusebenza. Ubuntu ne-linux mint kulula kakhulu ukuyisebenzisa (ngombono wami ngisho nangaphezu kwamawindows noma ama-macos). isoftware yamahhala yinhle okufanele wonke umuntu ayazi ngaphandle kokubandlulula ukuthi ama-windos nama-macos kulula ukuwafunda noma ukuwasebenzisa, okungamanga ngoba lezo zinhlelo ezisebenzayo nazo kufanele zichithe isikhathi sokufunda ukuzisebenzisa.
EMexico uma ufuna ukuthenga ilaptop ngaphandle kwelayisensi noma isoftware elayishwe ngaphambili lapho uma ingeyesiShayina, ngoba ezikhathini eziningi lapho uphawula ukuthi ufuna ukufaka enye i-OS ngaphandle kweWindows, ngokushesha bafuna ukuqinisa iziqinisekiso. Ngokuqondene nama-PC ahlanganisiwe, akukho nkinga noma ukuphazamiseka okungaka. Ngeshwa, iqiniso lokuthi bakuthengisela ikhompyutha yakho ine-Windows ne-Office ezilayishwe ngaphambili, okusobala ukuthi zifakwe ngamalayisense e-OEM, likhuthaza ukusetshenziswa kwalolu hlelo nokuthi abantu ababheki ezinye izindlela ezintsha. Ngiyethemba ukuthi kwesinye isikhathi ezweni lami sizoba nokuqeqeshwa okwengeziwe kwesoftware yamahhala, kufaka phakathi izikhungo zemfundo noma uhulumeni uqobo.
Wazi kangcono awufuni ntombi noma okungcono kakhulu ukuthi uphume egumbini lakho ,,, uqiniseke ukuthi lonke iqembu leMicrosoft alikwazi ukulala neposi lakho !!! Futhi uma uyi-alf yama-80's, udle amakati amaningi !!!
Futhi ungawathenga ama-PC ngaphandle kwe-OS efakiwe noma ngqo ne-Linux efakiwe? Angazi noma yiliphi isayithi.
Edolobheni lami angikaze ngibabone bengenayo i-OS, kepha ngibonile abanye ngeCanaima Linux (evela eVenezuela). Uma kukhona umuntu obathengisayo, kungumbuzo wokusesha kahle (noma mhlawumbe ukuncenga umthengisi?)
EColombia uthola ama-laptops ngaphandle kwe-OS efakwe ngaphambilini futhi uma wakha noma ucela ukwenzelwa i-PC ngendlela oyithandayo, ungakhetha ukuthi izophatha yiphi i-OS.
Angiyizondi iMicrosoft noma i-Apple kanjalo. Futhi njengo-Alf, ake sithi angiyisebenzisi kakhulu iLinux ngefilosofi yayo, kodwa ngokusebenza kwayo
Nginakho lapha iWindows 7 ne-Archlinux (PC yedeskithophu), ngine-Android yami futhi banginike i-iPod Touch. Awujabule? Cha, nginikeza into ngayinye ukusetshenziswa okuyifanele.
Futhi uma ngithanda ilaptop yokusebenza okuhle eza ngaphandle kwe-OS. Uma ngiyithola, ngizojabula 🙂
Njengoba sikhuluma ngezizathu, ngizoveza ezami.
Ngisebenzisa isoftware yamahhala kusukela ngo-2002, bekuyindaba yokufuna ukwazi ukwedlula noma yini enye.
Njengokujwayelekile, yayinezingxenye ezimbili ngakho-ke ngaphonsa iminyaka embalwa. Kepha kukhona obekumele kwenzeke okuzoshintsha yonke into, kalula, kancane kancane ngayeka ukusebenzisa iWindows ngaze ngafika lapho ngingabe ngisayisebenzisa nhlobo.
Yilapho ekugcineni ngifomathe ukwahlukanisa kweWindows, ngakhipha izitika ku-laptop yami, kufaka phakathi nelayisense le-OEM. Sengibe kanjena cishe iminyaka emihlanu futhi angikuphuthelwa.
hahaha nginqume ukuyeka ukusebenzisa amawindi ngoba umshini wami usanda kufomethwa futhi ungenwe yigciwane ku-5 min hehehe
Akukona ukuthi uyi-pitiñisquis, kepha ukuze ube "ophambene" namacala owakhulumayo (njengoTina Toledo, njll.) Kuzofanele ube yinto efana ne- "reconverso" futhi ube nencazelo ephikisayo, kepha lokho okulandisa kuphela ungaba "ngoguqulwayo" (lowo onencazelo efanayo) osazobe esesigabeni sangemva komshado (futhi njengabo bonke abanye abantu) ecabanga ukuthi lokhu kuzohlala unomphela futhi akukho lutho oluzokukhipha lapho.
Isikhathi kuphela esizotshela uma uguqulwa kabusha futhi uma lokho kwenzeka uyobe usuthole umkhondo ofanayo (hhayi okuphambene).
1. Lomfana uyi-salami elikhokhelwayo, akayona isisulu sanoma yini, ukhuluma ngokusobala nelula ku-fart, ngokunambitheka okuphelele futhi engazi ukuthi uthini ==> uyisidlakela, ukuthi avale umlomo wakhe uma engazi ngaleyondlela akubukeki isilima. Enye yezingcaphuno engizithandayo ebuwuleni bomuntu ivela kuMark Twain - futhi ongomunye wababhali nengqondo yami engiyithandayo: "Kungcono ukuvala umlomo wakho futhi ubukeke uyisilima kunokuwuvula ungashiyi kungabaza."
2. Isitifiketi se-Unix 03 siwumsuka omsulwa wokubeka imikhiqizo yakho ezindaweni zebhizinisi futhi ngikukhombisa ngendlela enamandla: ezinyangeni ezimbalwa ezedlule i-Apple yethule i-meac datacenter eNyakatho Carolina, e-USA. Yize i-Apple ithengisa i -bah, umkhonyovu- kumakhasimende ayo inguqulo ye-MacOS X yamaseva YONKE IMISHINI YESIKHATHI SAKHO SEBENZISA I-RUN LINUX, uma ngingaphosisi i-HP / AIX.
Ukube iMacOS X ibiyi-Unix ngempela ngabe basebenzisa owabo umkhiqizo we-server. U-Apple unamanga futhi unobuqili njengoMicrosoft uma kukhulunywa ngokuqola, uxolo, ukuthengisa imikhiqizo yabo. Ngiyaphinda ngithi: isitifiketi se-UNIX 03 simane nje siyindlela yokuthi labo ababhekele indawo ye-IT yenkampani ngayinye bakwazi ukwethula imikhiqizo ye-Apple njengenketho evumelekile ngoba baqinisekisiwe njenge-Unix - esikhundleni sokusebenzisa i-F / LOSS nokonga izigidi zamadola.
3. I-Steam is sooo thick, it IS HUGE (like this in capital letters) futhi uma kukhona into eyodwa abagqame kuyo ukuthi kubucayi, akuyona into eyenzakalayo noma ngegalelo lokuthi bayinkundla yokuxhumana engu- # 1 yokuthengisa amagama evidiyo, uma bethi banayo leyo miphumela-ke banayo, abazukuzishisa bona ngokwabo besho into engekho ukuze kuthi ngemuva kwesikhathi bonke baphonswe entanyeni yabo. Futhi angazi ngawe kepha ngifunde okuthunyelwe okuningana kusuka konjiniyela beValve neNVIDIA lapho bachitha khona ukulungiselelwa abakwenzele inguqulo ye-GNU / Linux nezinselelo abazethuliwe futhi ngiyakuqinisekisa ukuthi abaqambi amanga noma noma yibaphi abathuthukisiwe, empeleni bangabanye babantu abakhaliphile futhi abambophileyo ^ _ ^
Master, kufanele ufunde ukubona lapho umuntu ekhuluma iqiniso nalapho ephonsa isikrini somusi 😉
Ngikuhlolile ukusebenza kwe-GNU / Linux ngokwemisebenzi yansuku zonke (ngisho nokusekela i-cache ye-Facebook) nokukhuluma iqiniso, ama-GUI we-GNU / Linux aphendula ngendlela engcono lapho esebenzisa leyo misebenzi, ngaphezu kwemisebenzi yayo Izinqubo azikwandisi ukusetshenziswa kwazo kwezinsizakusebenza ngokungazelelwe njengoba iWindows isenza futhi indlela yokucubungula izingozi ayithinti i-GUI yonke njengoba kuvame ukwenziwa ku-Apple's Aqua GUI kanye neWindows Aero / Modern UI.
Okuphawulayo kungenxa yenkinga yokuklanywa kokwakhiwa kwamanje kweWindows.
Ngemuva kokususa i-NT, ama-Windows devs ahlala azungeze itafula ukuze ahlaziye okungaba okungcono kakhulu: ahlukanise ngokuphelele isitaki sokuqhafaza ohlelweni -njengohlelo lwethu lokusebenza- ukugwema ukuphahlazeka esimweni sezicelo ezisebenzise ngokungafanele izinsiza IWindows noma, ngakolunye uhlangothi, iyifaka ku-kernel bese izuza ukwanda kokusebenza okuphawulekayo.
Ekugcineni kwanqunywa ukuthi uhlelo olungaphansi kokuqhafaza lwalukhule ngokwanele ukuthi luzokwazi ukulwenza lube yingxenye ye-kernel futhi yileyondlela eqhubeka ngayo kusukela ngaleso sikhathi, yingakho lapho uhlelo lokusebenza noma isiphazamiso sohlelo lokusebenza uqobo luthinta isistimu yokuqhafaza lonke uhlelo shayisana nemodi yombhalo edumile ye-BSOD.
Kuningi okungashiwo futhi kushiwo ngokungahambisani nokuthanda isoftware yobunikazi ikakhulukazi iMicrosoft ne-Apple. IMicrosoft iqala njengenkampani esekela impumelelo yayo emsebenzini wabanye, ngokwesibonelo i-MS-DOS ehlonishwe kakhulu iyi-Q-DOS eguquliwe futhi enelungelo lobunikazi futhi umbhali wokuqala wabongwa futhi wakhahlelwa ezinqeni. IHotmail yinkampani etholwe yiMicrosoft futhi iyisibambiso sokwehluleka okukhulu kweMSN (isithonjana esingenamsebenzi esize neWindows 95). Kuze kube maphakathi neminyaka yama-90s i-Apple ibinecala elingenakunqotshwa neMicrosoft kodwa ngokufika kweMisebenzi futhi nezivumelwano ezithile noMnu Gates, lo mkhiqizo wavuswa. Empeleni, impumelelo yeMisebenzi maqondana ne-iPOD ingenxa yomsebenzi owenziwe yiRealNetworks maqondana nemakethe nemboni yomculo. Njengoba uzobona, bobabili uMnu Gate kanye noJob bathatha imibono bayisebenzisa, kepha kusobala ukuthi ngaphandle kokunikeza udumo kubakhiqizi beqiniso bale mikhiqizo.
I-Apple eyasungulwa ngabakwaSteve's (Jobs and Wozniack [Angikhumbuli kahle ukuthi ngiyibhala kanjani]) omunye wayeyingcweti kwezobuchwepheshe kanti omunye ebudlelwaneni bomphakathi kanti le misebenzi yamuva yabaphathisa okomuntu emhlabeni.
Manje, uma umuntu ehlaziya ukuthi kungani iMicrosoft iqhubeka nokusebenza futhi manje i-Apple, kungenxa yokuthi abantu abaningi bakushaya indiva ubukhona bezinye izindlela ezingancintisana kokubili ngekhwalithi nentengo futhi uma nje lokhu kuqhubeka ukwenzeka ushintsho luzoba luncane futhi le mikhiqizo kuzonqoba ngaphandle kokukhohlwa futhi ukuthi, uma unikezwe amandla ezomnotho anawo lawa, izinkampani ezincane ezibhekene nazo zivame ukuthengwa bese zinyamalala. Isibonelo, kamuva nje i-Skype itholwe yiMicrosoft, Java, Virtualbox kanye ne-mySQL etholwe yi-Oracle, lokhu kushiwo izibonelo ezimbalwa.
Abaningi badele i-Apple ngokufa kanti abanye baprofetha ukuphela kweMicrosoft, iqiniso ukuthi ngenkathi ukungazi ezinye izindlela kuqhubeka sizoqhubeka esakhiweni esifanayo sixoxe ngokuthi lokhu noma lokho futhi ekugcineni kosuku izinto zizohlala zinjalo.
Lapha umuntu angabuza, yini i-apula ne-microsoft efake isandla embonini yesoftware eye yaba nomthelela?
LOL! Ngabe ungazazi izinhlobo ezinganakiwe zamawindi?
Ngaphandle kokubala ukuthi akukho emthethweni, amagama awanele ukuchaza ukuthi kungani ukusetshenziswa kwezinguqulo ezinganakiwe zeWindows kungafanele kunconywe.
Uma abasebenzisi beWindows sebevele baceliwe ukuthi bagweme noma yiluphi uhlobo lokuqhekeka ne-activator ukuze bangasebenzisi imishini yabo, ngama-Windows anganakiwe alandwa kumasayithi alengise ama-gigabytes ngemuva kwama-gigabytes we-freeware ne-shareware, asazi ukuthi avelaphi, ukuthi zingaki izandla ezidlulile, noma ezenziwe ngubani, nokuthi ngaphandle kokuqhubeka nokuvalwa nokuphelelwa izibuyekezo, icala bekungeke kube ukuthi i-malware isebenza ohlelweni, kepha ukuthi uhlelo uqobo luyasebenza kwi-malware (noma enye yazo) okungeke kwenzeke ukuyisusa futhi okukuyi-raft adrift ngaphandle kwasenyakatho noma eningizimu maphakathi nolwandle olunamagciwane ama-botnets nobuthakathaka obuhlala kwi-inthanethi.
Iningi le-freeware eku-Windows livame ukuba wusizo, kepha ngeshwa, amathuluzi anjenge-nLite, uma ungaliphathi kahle lelo thuluzi, angenza iWindows ibe buthakathaka kakhulu kunalokho eyenzeka ngokuzenzakalela.
Iphambana kanjani… = /
Kancane lol. Yisizathu esisodwa kuphela, esinye sazo yisibonelo: https://blog.desdelinux.net/la-pirateria-como-modo-de-vida/ I-piracy ilimaza i-Linux ngaphezu kwe-Windows, futhi ibeke eceleni ama-paranoias eceleni, i-malware yibhizinisi elinenzuzo enkulu kulabo abayenzayo futhi iyingozi kakhulu kuwo wonke umuntu oku-Intanethi, ngakho-ke akukuhle ukusabalalisa isoftware ebunjiwe.
JP (@edconocerte) kusho
Akukona okokukhuthaza ubugebengu. Mina, kungenxa yokuhlola, ukumiswa, njll ... (kungani ukhokhela ilayisense wento engizoyisebenzisa amasonto ambalwa bese ngiyilahla?).
Umbono wami othobekile.
Phendula ku-JP (@edconocerte)
Ngalokho, isilingo samanje sihle kakhulu, okuyizinsuku ezingama-30 zokuhlolwa, futhi uma ufuna ukukuzama ngaphezulu, abakwaMicrosoft uqobo bathe ungasebenzisa umyalo slmgr -isikhali (esigungwini njengomlawuli ku-Windows 7) ukuze uphinde ube nezinsuku ezingama-30 zokuzama lapho uqala kabusha, kepha lo myalo ungasetshenziswa kathathu kuphela ukunweba isikhathi sesivivinyo, ukuze lokho kube sekuvele kuyizinsuku eziyi-120 (izinyanga ezine ) weWindows esemthethweni.
I-Cryptocat, enye indlela enhle nejabulisayo yezingxoxo ezizimele.
I-HTML5ify, sebenzisa isidlali se-HTML5 ukudlala ividiyo ku-Chrome